ခွန်တူးလေး + နန်းမိုးမိုးစံ (စုံတွဲသီချင်း) | ပြည်ထောင်စုထဲက ''ပအိုဝ်း''
စန္တာ on Zawgyi-Paoh Fontkhunokkerkyaw on Pa-Oh Ringtones CollectionKhun Sun Oo on တောင်ကြီးမြို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ မြင်ကွင်းများthiha aung on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများkhunmoekyaw on တောင်ကြီးမြို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ မြင်ကွင်းများခွန်ဌေးဦး on ပအိုဝ်းသီချင်းများ Download Linksဒွိဟခွန်မောင်; on Pa-Oh Fonts များ Download လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းKhun on Pa-Oh Fonts များ Download လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းkhun moung koe on Zawgyi-Paoh Fontစောကနဲလေး on ပအိုဝ်;လိတ်လဲုင်, ဗဟို;သွဉ်တန်, – ဆက်သွယ်ရန်	မိတ်ဆွေများနှင့် Link အချို့
« နာ,နောဝ်, .. ခွေဖ၀ –…
Zawgyi-Paoh Font »
ခွန်တူးလေး + နန်းမိုးမိုးစံ (စုံတွဲသီချင်း)Published September 20, 2010 | By Admin-Khun	အခုတင်လိုက်တဲ့ သီချင်းအခွေကတော့ (စုံတွဲ သီချင်း)ခွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းခွေရဲ့ နာမည်ကတော့ (ရက်)ဆိုတဲ့ ဗမာလို (အချစ်)ပေါ့။ ဒီအခွေကိုလည်း တောင်ကြီးကို ကျနော်အလည်ပြန်စဉ်က အဆိုတော် နန်းမိုးမိုးစံ ကိုယ်တိုင် လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ ပေးလိုက်တဲ့ အခွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခွေလုံး အွန်လိုင်းတင်ဖို့အတွက် ကျနော်နန်းမိုးမိုးစံကို ခွင့်တောင်းပြီးတော့ ခွင့်ပြုပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ MP3 သီချင်းအွန်လိုင်း နားဆင်လိုလျှင်တော့ ပုံအောက်က <Continue Reading> ဆိုတဲ့လင့်ပေါ်မှာ နှိပ်လိုက်ပါဗျာ။ သီချင်းကို Download လုပ်ရန်အတွက် သီချင်းခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာ နှိပ်လိုက်ပါ။
(၈) ပွိုးတမဲုင်, နာ,သျှောင်းညာ;
Posted in ပအိုဝ်းသီချင်း	4 Responses to ခွန်တူးလေး + နန်းမိုးမိုးစံ (စုံတွဲသီချင်း)	khun myint aung says:	January 8, 2013 at 2:50 am	Hello’
my name is khun myint aung from hti lon. Now i’m in toronto city canada. I want to buy paoh VCD , DVD music and movies . could you please give me any idia for how to buy. Thank you
khun myint aung
khun myint aung(Quote)
Reply	khunthanlay says:	March 20, 2011 at 1:36 pm	ဒိတစ်ခွေလုံးကို အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျာ အခုလိုတင်ပေးတဲ့
တစ်မေးချင်ပါတယ် ကိုလေဇာကို ဘယ်ရွာသားလဲ ဘယ်မြို့နယ်ကလဲလို့သိချင်တယ်ဗျာ အဆင်ပြေရင်ပြောပြပါလား
ကျတော်ကတော့ ဆီဆိုင်ကပါ . အခုရန်ကုန်မှာ ကျောင်းလာတက်နေတယ် ကိုလေဇာ အောင်မြင်ပါစေဗျာ
ဒိထက်မက ကိုယ်လူမျိူးအရေးကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ
Reply	win hlaing says:	September 29, 2010 at 10:34 pm	တစ်ခုကြားထားတာရှိတယ်… အဆိုတော်တွေ အခွန်ဆောင်နေရတယ် တဲ့.. ပအိုဝ်း အဆိုတော်တွေပါလားတော့မသိဘူး..
Reply	win hlaing says:	September 29, 2010 at 10:30 pm	သီချင်း အားလုံး ဆွဲချ သွားပြီ ဗျို့ ..
ခွန်ပအိုဝ်း | ပအိုဝ်;သွီ; | Pa-Oh MP3Copyright © 2016. All Rights Reserved. Designed by Khun Lazer.